Muriwo webindu: Ongororo uye zvinyorwa - ikkaro
Kisimusi yakakosha: LEGO Boost Guide
kudzidziswa >> Gardening >> Muriwo chigamba
Ndine munda uye pano ndinosiya zvinhu zvine chekuita nazvo. Zvishandiso zvandinogadzira, kuyedza, kurima maTurkey, kudzora tupukanana, nezvimwe.
Ini ndinotsanangura zvandinoita uye kana zvichindishandira. Zvandinoda kuita uye kusahadzika kunouya munzira senge kabhuku.
Hozhwa uye madiki macachechi ndicho chipembenene chakaipisisa chandinacho izvozvi mubindu. Idambudziko rakakomba nekuti vanouraya zvirimwa.
Zvakare ne iyo itsva padding system iwe unofanirwa kuve wakangwarira nekuti zvinoita sekunge vanoifarira zvakanyanya uye vari kuzozvara zvakanyanya.
Kune nzira dzakasiyana, zvigadzirwa uye maitiro ekurwisa. Nhasi ndauya kuzotaurira imwe hunyanzvi hwekudzivirira hozhwa kubva pakukwira miti kana zvirimwa zvine misoro mirefu uye mazano ekuvandudza nekuishandisa mune dzimwe nzira. Iko kutsvaira kuvadzivirira kuti vasakwira kumusoro kune zvinomera.
Kurima sei ne mulching uye usina kurima
Gore rega rega ini ndine dambudziko rakafanana negadheni. Isu tinogadzirira ivhu, isu tinotodyara mushure memavhiki mashoma masora kana huswa hunonakidza hwatora zvese. Kunze kwezvo, ini handina tarakita uye zvese zvinofanirwa kushandiswa nebadza.
Gore rino ndichaedza kugadzirisa matambudziko maviri aya. Ndakaedza kugadzirira ivhu nekurifukidza ne mulch ndokusiya rakagadzirira kurima pasina kurima. Mhedzisiro yekutanga, sezvaunenge uchizoona, yanga ichivimbisa.
Nzira yekuisa manyowa
Ini ndinodzokera kumusoro wenyaya wekuumba manyowa kubva kumamwe mavhidhiyo andakaona Charles kudzikisira iyo yakavakirwa pane huzivi hweNo Dig, No Dig (iyo yatichataura nezvayo mune imwe chinyorwa). Kudonhedza kunongoshandisa manyowa mumunda wayo. Manyowa ezvese. Uye inodzidzisa imi mese kuigadzira uye kuishandisa uye semuti uye kutarisira gadheni rako.
Mapeji ekubikisa Kune akawanda, kunyangwe ese akavakirwa pamusimboti mumwe asi mumwe nemumwe anozviita nenzira yake.
Ndakaona ndikaverenga zvakawanda zvine chekuita nazvo uye kune vanhu vanoedza kuzvimhanyisa zvakanyanya sezvinobvira kuti maitiro acho akurumidze, vamwe vanowedzera nyama, kunyangwe chikafu chakabikwa chakasara, asi handizvione izvo. Kuwedzera nyama kunoita sekukanganisa kwerudzi urwu rwekuora kweaerobic, chimwe chinhu ndechekuti iwe manyowa kubva mudhorobha rakasimba marara, senge iwo akaunganidzwa mumabhini, asi anowanzoitwa nemaanaerobic maitiro uye isu tiri kutaura nezve chimwe chinhu chakasiyana zvachose.
Cayenne, kumwe kusiana kwe capsicum chinense Iyo ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anonyanya kushandiswa zvinonhuwira, pamwe nekuti kunyangwe iine kupisa kwakanyanya, inotsungirira kuvanhu vazhinji.
Iine mazita mazhinji akajairika: cayenne, pepper cayenne, tsvuku tsvuku, chili mhiripiri.
Iyo ine 30.000 kusvika ku50.000 SHUs mu Scoville chiyero.
Pari zvino Izvo zvinonhuwira zvinokodzera mukanwa watinazvo kumba. Iyo inopa yakanyanya itch asi isina kuitwa yakanyanyisa. Vamwe vanoda habanero ivo vatove kuenda kuyera uye kuvaviwa zvakanyanya uye carolina anokohwaIzvo hazvifungidzirwe kudyiwa nevanhu, hahaha.
Gore rino ndinoda edza majalapenos.
Carolina Reaper kana Carolina Reaper
El Carolina Reaper kana Carolina Reaper yaive mhiripiri inopisa kwazvo pasi rose muna 2013 ine kukosha kwe2 Scoville Units, kunyangwe huwandu hwayo hwakajairika hunosiyana pakati pe220 ne000 zvichienderana chiyero che scoville. Kutsamwa chaiko kunozoita kuti isadyike. Iye zvino kune mamwe marudzi espicier akaita sePepper X.
Izvo zvakasiyana zve Capsicum chinense kunyanya iyo HP22BNH yakawanikwa naEd Currie kubva kukambani PuckerButt Pepper Kambani. Muchinjikwa pakati the Habanero chili uye iyo Naga Bhut Jolokia (iyo yandakanga ndoda kutenga gore rino munzvimbo inochengeterwa vana)
Chiyero cheScoville chakagadzirwa naWillbur Scoville kuyera kuti mhiripisi inopisa sei. Inoongorora huwandu hwe capsaicin, chinova chinhu chiripo muzvirimwa zvejenasi capsicum. Akazviita kuburikidza neye Organoleptic bvunzo uko kwaakaedza kuenzanisa uye kutsvaga nzira yekutenga zvigadzirwa zvakasiyana. Kunyangwe hazvo paine zvisingakwanisike sezvo iri ongororo yenyukanoleptic uko kuzviisa pasi kwevanhu uye pfungwa yavo yekukwezva mukanwa, kwaive kumberi.
Nhasi (kubvira 1980) nzira dzekuwongorora senge High Performance Liquid Chromatography (HPCL) dzinoshandiswa dzinoyera huwandu hweCapsaicin. Idzi nzira dzinodzosa kukosha mu "zvikamu zve pungency kana kupisa", ndiko kuti, mune chimwe chikamu checapsaicin pamirioni yemupfu wehupfu hwakaomeswa. Huwandu hunokonzeresa hweyuniti hunowedzerwa ne x15 kushandura kuita zvikamu zveScoville. Hazvingave zvakafanira kuenda kuScoville asi ichiri kuitwa kunze kwekuremekedza kune akaitsvaga uye nekuti iri sisitimu inozivikanwa kare.
Mhando dzakasiyana dzesango dzinogona kuve neCapsaicin yakawandisa kana shoma, asi kunyangwe nzira dzekurima uye / kana zvakatipoteredza zvinogona kuona kuti chipisi chinopisa kana kushoma kunyangwe chiri chemhando imwechete.
Izvo zvakasiyana zve Capsicum chinense.
Mukati mehabanero munewo huwandu hukuru hwemhando
Mbeu uye kumera
Mbeu dzemhiripiri nemhiripiri zvinogona kutora nguva yakareba kuti zvimere, kunyanya kana tembiricha isina kukwana, asi kana tikazviisa pamusoro pemadhigirii makumi matatu tinozoita kuti dzimere pakati pemazuva manomwe negumi nemana, mhodzi dzinotumbuka uye macotyledon anoonekwa .
Mukati me capsicum chinense tinowana mhando dzakasiyana dzechili mhiripiri. Iwo anozivikanwa zvikuru ndeaya Habañero mhiripirila cayenne, ají panca uye ají limo. Pano kwenguva iyo yatichazotaura nezve maHabanano avo vatiri kukura.
Maitiro ekugadzira kantini kubva munhanga
Kubva zhizha rapfuura ndaomesa imwe dzungu (dipper gourd) , zvakanaka ini ndinofunga idipper gourd. Izvo zvakafanana ne mapilgrim manhanga, asi neichi chimiro chakarebesa.
Uye nguva yasvika yekuita chimwe chinhu nayo ;-)
Sezvo ini ndangochengetedza 1 ini ndoda kuishandisa seimwe kantini kutakura mvura. Kuvakwa kwaro kuri nyore kwazvo. Isu tinongofanirwa kuidurura uye kuikwenya.
Nzira yekugadzira imba yekugadzira complet nemapallets
Ndatanga ku gadzira manyowa uye ndaita a yakapusa musanganiswa wemumba pamwe nemapallet. Ini ndinosiya mamwe mafoto uye zvimwe zvidiki dudziro kuti iwe uone kuti ndazviita sei uye pakupera kwechinyorwa iwe uchaona imwe modhi inogadzirwa nemapallets, kutevedzera komputa mabhini.
Ini ndinoshandisa zvekare pallets dzandave kushandisa zvakare kubva kuvanhu kana makambani anga achienda kuarasa.
Saizi yandakashandisa maEuro pallets, saka iwe unotoziva iyo 1,20 × 0,8 m chiyero kuitira kuti compost bin rive ne base ye1m x 0,8m kukwirira.